Sivavanye izixhobo zika "Hama" ezinefuthe | Iindaba zeGajethi
Sivavanye izixhobo zeHama Influencer
UMiguel Hernandez | | Izixhobo, elektroniki
Umxholo ongaphezulu nangaphezulu uveliswa kwiifowuni eziphathwayo kwaye nayo iyasetyenziswa ngeefowuni eziphathwayo. Siza kukuxelela imfihlelo, iividiyo zam kunye nohlalutyo ziveliswa nge-smartphone, kwaye uya kuzibuza ukuba yintoni iqhinga lokufumana iziphumo ezilungileyo, kuba sisebenzisa olu hlobo izixhobo.
U-Hama usungule uthotho lweemveliso ezenzelwe ukuba wenze owona mxholo ungcono kwi-Instagram, YouTube okanye naphina apho ufuna khona. Fumanisa kuthi ukuba zeziphi ezi zinto zifunekayo, ukuba zisebenza njani kwaye kutheni kufuneka ziyinxalenye yakho Misela iziphumo zobungcali.
1 Isangqa sokukhanya kwe-LED
2 Imakrofoni ye-lavalier yeziphumo ezilungileyo
3 I-Hama 4-in-1 Tripod
Isangqa sokukhanya kwe-LED
Ngokuqinisekileyo le yeyona ibonakala kum ibaluleke kakhulu kuzo zonke iimveliso esizihlalutya namhlanje. Amakhonkco okukhanya e-LED eze ukusombulula ingxaki ngaphambi kokuba sisombulule ngezibane ezinkulu kunye nezibi, ngoku kwisithuba esincinci sinento esiyifunayo.
Ezi zikhonkco ze-LED sivumele ukuba sikhanyise ubuso okanye imveliso esiyijongayo, ukubonelela ngamathuba okuba yonke into ibonwe ngokucacileyo kwaye ngaphandle kwezithunzi, ngenxa yoko ufumane isiphumo sobungcali, ugxile ngaphambili okubalulekileyo, kwaye ushiye ubumnyama nengxolo emfanekisweni ngasemva.
Ngokukodwa iringi ye-Hama ye-LED ekhanyayo Ikhupha ukukhanya kwemini ukuya kuthi ga kwi-6000K, kwaye inokuncitshiswa ngokuqhubekayo. Ikhutshwe nge Ii-LED ze-128 Kwaye kuyamangalisa ukuba inobunzima kancinci kwaye iyasonga, ke siya kuyithutha ibhegi yayo ibandakanyiwe ngokulula.
Jonga iphepha ledatha yemveliso: LINK
Inomsesane we-10,2-intshi kwaye ibandakanya inkxaso ehambayo kwiziko eliya kusivumela ukuba sibe ne-smartphone yethu ngokulula. Sinezibuko le-USB kunye neqhina lolawulo eliza kusivumela ukuba sililungelelanise, kwaye likwaquka nesixhobo seBluetooth ukuze sikwazi ukulungelelanisa ukurekhoda.
Singayandisa ihupula ukuya kwiisentimitha ezili-138, ubuncinci bobude obuyi-52 cm. Ndothuswe kukuba ngenxa yobume bayo kunye nezothutho sinokuzisebenzisa njengesibane. Oko kuyakuxhomekeka kuwe, kodwa kufanelekile kwi-unboxing, tutorials ye-makeup kunye neebhlog zevidiyo.
Kwelinye icala, njengenzuzo esinayo yokuba sinokuyijika iringi kumacala amaninzi. Kuvavanyo lwethu kuye kwasebenza kwaye iithoni zombala ezintathu zingaphezulu ngokwaneleyo ukuba zifumane iziphumo ezilungileyo ngokubanzi. Ezi ntlobo zeendawo ezikhanyayo zilungele ukurekhodwa. Le mveliso ikwiqondo lakho lokuthengisa eliqhelekileyo ukusuka kwi-euro ezingama-69,00.
Imakrofoni ye-lavalier yeziphumo ezilungileyo
Emva kokukhanyisa, iaudiyo ngumceli mngeni wesibini omkhulu kubaphembeleli. Xa ujonga izisombululo zale ntloko, amaxesha amaninzi sifumana iindlela ezibiza kakhulu okanye ezinobunzima, nangona kunjalo, amava andixelela ukuba kungaphezulu imakrofoni elungileyo yeLavalier.
Kule meko u-Hama naye uyaphuma ayokudibana neyakhe I-Smart Lavalier, Imakrofoni yelavalier eyilelwe iiPC, iikhamera kunye neefowuni eziphathwayo, ezihambelana ngokupheleleyo nayo yonke into. Inobude bekhebula beemitha ezintandathu, into ephawuleka ngakumbi.
Le microphone ine-frequency range phakathi kwe-50 Hz kunye ne-20 KHz kunye ne-impudence ye-2200 Ohm. Njengoko kunokulindelwa ngenxa yobume bayo kunye namandla ayo, sisebenza nge-omni-directional microphone, oko kukuthi, akuyi kufuneka siyibeke ngendlela ekhethekileyo ukuze sizibambe ngokuchanekileyo izandi zethu.
Iphepha ledatha yemveliso> LINK.
Ukuchaneka ngakumbi, sinobuntununtunu 45 dB kwaye kuvavanyo lwethu luphuculwe ngokumangalisayo. Ukongeza, ndiyifumene ikhethekile ukuba le microphone inebhetri kunye nesilawuli esivumela ukuba siyilungelelanise zombini iikhamera kunye nee-smartphones (ngaphandle kokusebenzisa ibhetri).
Inomnqwazi omncinci othintela izandi ezicaphukisayo kunye nomoya kunye neklip encinci Ngendlela esinokuthi simise ngayo kwihempe yethu okanye naphina apho sifuna khona ngokulula, oku kufanelekile ngakumbi kwaye kunokwanela uninzi lwabantu, oko kukuthi, ngaba kufanelekile ukutyala imali kumakhulu ee-euro?
Le mveliso isungulwe ngu-Hama nge-euro ezingama-34,95 kuphela kwaye iya kufumaneka kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso. Imakrofoni ye-Hama Smart Lavalier lavalier yeyona nto ifanelekileyo kwabo bafuna ukuvelisa ividiyo ye-YouTube okanye baxelele izinto abazithengileyo kwi-Instagram: imakrofoni ekwi-omnidirectional ngakumbi efanelekileyo ukurekhodwa kwelizwi kunye nevidiyo.
I-Hama 4-in-1 Tripod
Imveliso yesithathu enkulu yosuku lwethu ukuya kuthi ga ngoku abachaphazelayo Ngaphandle kwamathandabuzo i-tripod, okanye ngaba usashiya ukuphumla kweselfowuni kwibhokisi yezihlangu?
Ndoda, i-tripod iyimfuneko ngokungqongqo kwaye le ndlela uHama ikunika yona ilungile. Le tripod inobude obuncinci be-20cm kunye nobude obuphezulu ngengalo yayo yeteleskopu engekho ngaphantsi kweesentimitha ezingama-90, leyo phantse ibe yimitha enye, uintuthuzelo yokwenene.
Iveliswa ngomxube weplastiki kunye nealuminium, kodwa kufuneka sigxininise ukuba indawo esezantsi inayo ngerabha engatyibilikiyo ebomvu esinceda kakhulu xa sibeka i-tripod apho sifuna khona. Ubunzima bebonke be-tripod ziigram ezili-185 kuphela, into eye yasothusa.
Sithathela ingqalelo ukuba sineeadaptha zokusebenzisa i-tripod eneenkqubo ezintathu ezahlukeneyo: i-GoPro, i-smartphone enenkxaso enokwandiswa kunye nekhamera yevidiyo yemveli. Iziphumo zilungile kwaye imveliso ibizinzile kuvavanyo lwethu, into enombulelo ongazenzisiyo.
Nangona kunjalo, sinenye i-tripod ekhethekileyo yabaphembeleli, i itafile yetafile yeetafile Iqulethwe yimilenze emithathu yenkxaso kunye neentloko ezimbini kunye nomnini we-smartphone, ngokunjalo Amacandelo ama-4 anokuhlengahlengiswa ngokusebenzisa indlela ye-latch ehambayo, ekucofeni kweqhosha ngaphakathi kwimilenze ye-tripod. Iinyawo zerabha zinikezela ukubambelela ngokuqinileyo kwiindawo ezigudileyo, ezimtyibilizi nezingalinganiyo, ngelixa inqanaba lebhabhu lidityaniswe kwintloko yesithathu. Ingasetyenziselwa zombini njenge-monopod okanye njenge-tripod. Eyona nto intle kukuba xa isongelwe akunakuthatha indawo: nge ubuncinci bokuphakama kweesentimitha eziyi-16 (ubuninzi be-19) kunye nobunzima be-260 gram, inokuqhutywa ebhegini yakho okanye kubhaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Sivavanye izixhobo zeHama Influencer
I-Audio-Technica ATH-CK3TW, yeyona nto ibalaseleyo? [UHLAZIYO]
Uphengululo lweAmazon Flex: Yintoni le? Ixabiso?